A Day in the Life ofaPublic Policy Officer
မူဝါဒ ရေးရာနဲ့ ပတ်သတ်လို့ စိတ်ဝင်စားပါသလား။ Wynee မှ တင်ဆက်ပေးမယ့် "A Day in Life" ဆိုတဲ့ ဆောင်းပါးတွဲမှာတော့ professional တစ်ဦးရဲ့ တနေ့တာ ဖြတ်သန်းပုံတွေကို တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက် အလုပ်တစ်ခုအတွက် အင်တာဗျူးဖြေဆိုဖို့ ၊ ရာထူးတစ်ခုအတွက် ပြင်ဆင်...
ဘွဲ့ရခါစ လူငယ်များအတွက် အလုပ်ခွင်ဝင်ရန် လိုအပ်သော အရည်အချင်းများ နှင့် ထိုအရည်အချင်းများကို ရယူနည်းများ။ တက္ကသိုလ်ပညာရေး ဟာ သာမန်ဘွဲ့တစ်ခုနဲ့ စာတွေ့သင်ခန်းစာတွေထက်ကို ပိုပြီး ရည်ရွယ်ဦးတည်နေပါတယ်။ ထိပ်တန်းတက္ကသိုလ်တွေက အောင်မြင်လာတဲ့ ဘွဲ့ရက...
My degree does not match the job I want to get, what should I do?
ရထားတဲ့ဘွဲ့က လုပ်ချင်တဲ့ အလုပ်နဲ့ ကိုက်ညီမှု မရှိရင် ဘာဆက်လုပ်သင့်သလဲ။ သင့်ရဲ့ပုံဖော်ထားတဲ့ စိတ်ကူးထဲက အလုပ်ကို အဲ့ပညာရပ်နဲ့ဆိုင်တဲ့ ဘွဲ့တစ်ခု မရှိတဲ့ အတွက်ကြောင့် လက်လျော့မပစ်ပါနဲ့။ ယနေ့အလုပ်ခွင်မှာဆိုရင် အလုပ်မှာ အသုံးပြုနေတဲ့ စွမ်းရည်တွ...
What career options do I have afteramaster or doctorate qualification?
မာစတာဘွဲ့ ဒေါက်တာဘွဲ့များရရှိပြီးနောက် ဘယ်လိုအလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းတွေရှိမလဲ။သင်လေ့လာနေတဲ့ ဘာသာရပ်အပေါ်မှာ အများကြီးအားစိုက်ထုတ်လေ့လာပြီးတဲ့နောက်၊ သင့်ရဲ့နာရီပေါင်းများစွာကို စာကြည့်တိုက်ထဲမှာပဲ ကုန်ဆုံးပြီး...
What one needs to consider before doingacareer switch?
အလုပ်အကိုင် ပြောင်းတာအတွက် လူတွေမှာ အကြောင်းပြချက် အမျိုးမျိုးရှိပါတယ်။ လက်ရှိ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမှာ တက်လမ်းမရှိဘူးလို့ ခံစားရတာမျိုး၊ မိမိရဲ့ အလုပ်အကိုင်ဟာ မိမိမျှော်လင့်ထားတာနဲ့ တခြားစီဖြစ်နေတာမျိုးပေါ့။အလုပ်ပြောင်းတာဟာ စိန်ခေါ်မှုများပြ...
ကြာ်ငြာ နဲ့ ဆက်ဆံရေး လုပ်ငန်းကဏ္ဍမှာ အခြေခံရာထူးနဲ့ စတင် ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်မယ်ဆိုရင် သင့်ရဲ့ တနေ့တာက ဘယ်လိုများရှိမလဲ။ ဒီနယ်ပယ်ကတော့ ကသောင်းကနင်း အခြေအနေကို ထိန်းချုပ်နိုင်မဲ့သူတွေနဲ့ ကိုက်တာပါ။သမရိုးကျ အပြောင်းအလဲမရှိ တနေ့တာကို ဖြတ်သန်းလို...
What kinds of job pay the most/have the best benefits?
ဘယ်လိုအလုပ်မျိုးကနေ အကျိုးခံစားခွင့် အများဆုံးရနိုင်သလဲ။ သာမန်အားဖြင့် ပညာရှင်တွေကို အကျိုးခံစားခွင့်ပေးတဲ့အခါ ၁။ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ဒီပညာရှင်ရဲ့ ကျွမ်းကျင်မှုကို ဘယ်လောက်လိုအပ်လဲ။၂။ လုပ်ငန်းအတွေ့အကြံု​ ရယ်စတဲ့ အချက်ပေါ်မှာ မူတည်...
ဆးဝါး ထုတ်လုပ်မှု စက်ရုံတွေမှာ ရှိတဲ့ အလုပ်ကိုင် ရွေးချယ်ခွင့်တွေက ဘာတွေလဲ။ ဆေးဝါး ထုတ်လုပ်မှုစက်ရုံဆိုတာဟာ ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှုတွေရဲ့ ကဏ္ဍ တစ်ခု အနေနဲ့ ပါဝင်ပါတယ်။ စက်ရုံလည်ပတ်မှုမှာဆိုရင် ဆေးဝါးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာမှုတွေ၊ ထုတ်လုပ်မှု...
What are my career options with engineering knowledge?
အင်ဂျင်နီယာ ဘာသာရပ်လေ့လာထားသူတွေ အနေနဲ့ အလုပ်အကိုင် ရွေးချယ်ခွင့်တွေက ဘာတွေလဲ။ Engineering ဘာသာရပ်ကို လူသားတွေရဲ့ ဘဝအမှာ လွယ်ကူပြီး ပိုမို အဆင့်မြင့်အောင် ပြုလုပ်ပေးတဲ့ သိပ္ပံပညာရပ်တွေထဲက တစ်ခုလို့ အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုလို့ရပါတယ်။ Engineering...